होमो इरेक्टस: विशेषताहरु, उत्पत्ति, विकास र लक्षण | नेटवर्क मौसम विज्ञान
हामी जान्दछौं कि मानव धेरै प्रजातिहरु र विकास को माध्यम बाट वर्तमान मानव सम्म गयो। हाम्रो वर्तमान प्रजाति, Homo sapiens, अन्य प्रजातिहरु बाट आउँछ। ती मध्ये एक हो Homo erectus. Homo erectus एक आदिम मानिस हो जो Pleistocene को भाग को समयमा पृथ्वी को विभिन्न भागहरु मा बस्नुहुन्थ्यो। सबैभन्दा पुरानो नमूना Demanisi, जर्जिया मा पाईयो, र लगभग १. million मिलियन वर्ष को मिति। यस प्रजाति को पहिलो खोज १ Java 1,8 १ मा जाभा को एशियाई टापु मा भयो, जो अब इन्डोनेशिया को हिस्सा हो।
यस लेखमा हामी तपाइँलाई तपाइँको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा बताउन जाँदैछौं Homo erectus, यसको विशेषताहरु र यसको इतिहास।
1 होमो इरेक्टस को उत्पत्ति
3 होमो इरेक्टस लक्षण
को उत्पत्ति Homo erectus
यो आदिम मानिस पृथ्वी मा एक लामो समय को लागी अस्तित्वमा छ। यसको विलुप्त हुने मिति मा विरोधाभासी राय छन्। केहि मानवविज्ञानीहरु विश्वास गर्छन् कि यो भयो लगभग ३००,००० वर्ष पहिले, जबकि अरुले दाबी गर्छन् कि यो ,300.000०,००० बर्ष पहिले भयो। यसले केहि विशेषज्ञहरु लाई विश्वास गर्न को लागी नेतृत्व गरेको छ कि उनी संगै बस्छन् होमो सेपियन्स, तर यो आज सबैभन्दा सामान्य स्थिति छैन।
को मूल Homo erectus यो पनि विवादास्पद छ। यस तरीकाले, कसैले यसलाई अफ्रिका मा राखे, यद्यपि धेरै मानवविज्ञानी असहमत छन् र त्यहाँ पाईएको नमूना लाई कल गर्नुहोस् होमो अर्गस्टर। यस पदका समर्थकहरुको दाबी छ कि Homo erectus यो एशिया को मूल निवासी हो।
यो आदिम मानिस को सबैभन्दा उल्लेखनीय विशेषताहरु को एक आफ्नो कपाल क्षमता हो, जो अघिल्लो प्रजाति को भन्दा राम्रो छ। यो परिवर्तन को लागी मुख्य कारणहरु मध्ये एक आगो संग कसरी व्यवहार गर्ने को खोज थियो, जसले पोषण मा सुधार ल्यायो।
Homo erectus को पुर्खाहरु मध्ये एक हो होमो सेपियन्स। मानव विकास को चरण जसमा Homo erectus यो सबैभन्दा अज्ञात चरणहरु मध्ये एक हो, त्यसैले धेरै फरक सिद्धान्तहरु एक साथ रहन्छन्। तेसैले, ती मध्ये एक १. million मिलियन वर्ष पहिले अफ्रिका को मिति हो।
यो ध्यान दिनुपर्छ कि अन्य विशेषज्ञहरु पुष्टि गरे कि महाद्वीप मा भेटिएको अवशेष अर्को समान प्रजाति, Ergaster को हो। सबै को तथ्य संग सहमत हुनुहुन्छ कि को उपस्थिति संगl होमो इरेक्टस, आदिम जनता खानाबस्ती बने र अफ्रिका छोडे।
को पहिलो खोज Homo erectus पूर्वी एशिया मा भयो, तर युरेशियामा अवशेषहरु पनि भेटिए। दुर्गम क्षेत्रहरु मा जहाँ तलछट पाईन्छ, यस प्रजाति को सफलता सही प्रमाणित गर्न सकिन्छ। यो धेरै कम शारीरिक र सांस्कृतिक भिन्नताहरु को बिच उत्पन्न गर्दछ, किनकि उनीहरु प्रत्येक क्षेत्र को फरक परिस्थितिहरु लाई अनुकूल गर्न को लागी छन्। उदाहरण को लागी, यूरोप मा मौसम समय मा चिसो थियो र यदि यो आगो को खोज को लागी थिएन, यो एक ठूलो समस्या हुनेछ।
सबै विशेषज्ञहरु को घुमन्ते प्रकृति मा सहमत होमो ईरेक्टस भेटिएको प्रमाणले संकेत गर्दछ कि यो अफ्रिका छोड्ने पहिलो होमिनिड थियो। वर्षौं को लागी, यो दक्षिण पूर्व एशिया पुग्यो।
सबैभन्दा प्रसिद्ध परिकल्पना यो हो कि तपाइँ यस यात्रा को लागी ग्लेशियर को समयमा बनेको बर्फ पुल को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विस्तारको परिणाम हो यो अझै पनी इन्डोनेसिया, चीन, यूरोप वा मध्य एशिया को भागहरु मा देखिन्छ।
सबै जीवाश्म अवशेष संग, यो शारीरिक र जैविक विशेषताहरु निर्धारण गर्न सजिलो छैन। वैज्ञानिकहरु अनुमान गर्न को लागी विभिन्न मापदण्डहरु लाई विचार गर्छन्, विशेष गरी उचाई वा खोपडी को आकार। उदाहरण को लागी, दाँत आहार र अन्य महत्वपूर्ण बानीहरु को बारे मा धेरै महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्दछ।
यस मामला मा, हामी धेरै उप -प्रजातिहरु को उपस्थिति जोड्नु पर्छ, जो थोरै फरक विशेषताहरु छन्। त्यहाँ छन्, तथापि, को केहि सुविधाहरु Homo erectus जुन व्यापक रूपमा स्वीकार्य देखिन्छ।
को विशेषताहरु Homo erectus
थोरै को छाला को बारे मा थाहा छ Homo erectus। हामी सबैलाई थाहा छ, यो पसीना ग्रंथिहरु छन्, तर न त पतली न बाक्लो। हड्डी को मामला मा, को श्रोणि को संरचना Homo erectus यो आज मानिसहरु जस्तै छ। जे होस्, यो ठूलो र बलियो छ। केहि यस्तै फीमर को लागी भयो, र अधिक अवशेषहरु को रूप मा देखाईयो, यो अध्ययन गर्न को लागी सजिलो थियो। यसको उच्च आकार को अतिरिक्त, मांसपेशी सम्मिलन को केहि अंक संकेत गर्दछ कि शरीर बलियो र बलियो छ।
El Homo erectus, जस्तै नाम सुझाव दिन्छ, दुई खुट्टा मा हिड्छ, जस्तै Homo sapiens। सुरुमा यो सोचेको थियो कि पुरुषहरु को औसत उचाई धेरै सानो थियो, लगभग १.1,67 मीटर। जे होस्, नयाँ अवशेषले सोच्ने तरिका बदलिएको छ। अब यो अनुमान छ कि एक वयस्क १. 1,8 मिटर को उचाई पुग्न सक्छ, जुन अघिल्लो होमिनिन भन्दा अग्लो छ।
को चिनो Homo erectus उहाँ पनि धेरै बलियो हुनुहुन्छ, यद्यपि उसको कुनै चिन छैन। तथ्य यो हो कि दाँत सानो छ ध्यान को एक धेरै आकर्षित गरेको छ। पालीओन्टोलोजिस्टहरुले पत्ता लगाएका छन् कि जसरी शरीर ठूलो हुन्छ, दन्तको आकार घट्छ।
त्यस्तै गरी, जबडाको मांसपेशिहरु सानो भएको र घाँटी संकुचित भएको देखिन्छ। यो सम्भव छ कि आगो र chewy पकाएको मासु को उपस्थिति अधिक सजीलै यो प्रभाव उत्पादन। को खोपडी Homo erectus यो तीन विशिष्ट विशेषताहरु छन्। पहिलो सीधा supraorbital हड्डी हो, यद्यपि यो ग्रीस र फ्रान्स मा पाइएको त्यो आकार छैन। अर्कोतर्फ, उनीहरु खोपडी मा एक धनु शिखा छ, जो एशियाईहरु को बीच अधिक सामान्य छ। यी पनि धेरै मोटी occipital overhangs संग ती हुन्।
मा विचाराधीन प्रश्नहरु मध्ये एक Homo erectus यो हो कि उसले आफ्नो अस्तित्व को समयमा बोली भाषा को उपयोग गरेको छ। प्रजातिहरु को बारे मा एक सिद्धान्त उनीहरु लाई बनाएको समुदाय मा यो प्रयोग गर्न को लागी पहिलो मान्छे हो भनेर सुझाव दिन्छ।
यो जान्न गाह्रो छ कि यो सिद्धान्त जीवाश्म अध्ययन गरेर सही छ। यदि जीवविज्ञान यो तथ्य को समर्थन गर्न को लागी लाग्छ, किनकि उनीहरु मस्तिष्क र मौखिक संरचनाहरु यो गर्न को लागी छन्।
म्यासाचुसेट्स मा बेन्टले विश्वविद्यालय मा कला र विज्ञान को कलेज को डीन डैनियल Everett द्वारा एक हालै को अध्ययन, यस परिकल्पना को पुष्टि। उनीहरुको निष्कर्षमा आधारित, आदिम जनताले बोलेको पहिलो शब्द को सदस्यहरु द्वारा बोलीएको थियोl होमो इरेक्टस।
खाना को अनुसन्धान को सबैभन्दा रोचक पक्षहरु मध्ये एक हो होमो ईरेक्टस अधिक विशेष गरी, आगो पछि भएको परिवर्तन संग कसरी व्यवहार गर्ने भनेर पत्ता लगाए पछि। सुरु मा यो एक मांसाहारी जनावर थियो, मासु प्राप्त गर्न को लागी यो जनावर को शव को अवशेष प्रयोग गरीयो। अरु के छ त, उहाँ सब्जिहरु र घाँसहरु पनि स collect्कलन गर्नुहुन्छ, सकेसम्म एक आहार को खोजी मा।
म आशा गर्दछु कि यस जानकारीको साथ तपाईले यस बारेमा बढी जान्न सक्नुहुन्छ Homo erectus र तिनीहरूको विशेषताहरु।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » Homo erectus